Haayada GIZ oo beenisay in la musuq-maasuqay mashruuca dib loogu dayactirayo wadada laamiga ah ee isku xirta magaalooyinka Garoowe iyo Gaalkacyo - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaPuntlandHaayada GIZ oo beenisay in la musuq-maasuqay mashruuca dib loogu dayactirayo wadada laamiga ah ee isku xirta magaalooyinka Garoowe iyo Gaalkacyo
Haayada GIZ oo beenisay in la musuq-maasuqay mashruuca dib loogu dayactirayo wadada laamiga ah ee isku xirta magaalooyinka Garoowe iyo Gaalkacyo
November 21, 2016 Puntland Mirror Puntland, Somalia 0
Madaxa mashaariicda haayada GIZ u qaabilsan Soomaaliya Christoph Schmidt oo shalay galab oo Axad ahayd shir jaraa’id ku qabtay magaalada Garoowe ee caasimada Puntland. [Xuquuqda Sawirka: Puntland Post]
Garoowe-(Puntland Mirror) Haayada iskaashiga caalamiga ah ee Jarmalka GIZ oo wakiil uga ah wadamada Midowga Yurub mashruuca dib loogu dayactirayo wadada laamiga ah ee isku xirta magaalooyinka Garoowe iyo Gaalkacyo ayaa kasoo horjeesatay musuq-maasuq la sheegay in mashruuca lagu sameeyay.
Madaxa mashaariicda haayada GIZ u qaabilsan Soomaaliya Christoph Schmidt oo shalay galab oo Axad ahayd shir jaraa’id ku qabtay magaalada Garoowe ee caasimada Puntland ayaa sheegay in aysan jirin wax musuq ah oo lagu sameeyay mashruuca.
“Hawsha wado dhisida wadada waxaa wakiil ka ah haayada wadooyinka Puntland ee PHA, taasoo si joogta ah ula shaqaysa haayada GIZ, waxaan cadaynayaa goobjoogna aan ka ahayn in si waafaqsan shuruucda Puntland iyo kan caalamiga ah loo maray markii la bandhigayay qandaraaska, waana ku qanacsanahay habka wanaagsan ee loo maray,” ayuu yiri Christoph Schmidt.
“Wallow aan la go’aamin cidda qandaraaska ku guulaysatay, waxaan hubaa in uusan jirin wax musuq-maasuq ah oo jira , taasna waxaa cadeeyay baaritaan dib u eegis ah oo aan samaynay anaga iyo haayada wadooyinka PHA,” ayuu ku daray madaxa mashaariicda haayada GIZ u qaabilsan Soomaaliya.
Christoph Schmidt ayaa sheegay in ay jiraan heshiis ay deeq bixiyeyaasha ku gaareen in wixii dayactir ah sida kaabayaasha dhaqaalaha la siiyo shirkadaha maxaliga ah si shirkadahaas ay fursado ugu helaan in ay baaxadooda balaarato kadibna ay awood u yeeshaan in ay dalkooda uga faa’ideeyaan.
Jawaabta katimid haayada GIZ ayaa imaanaysa asbuuc kadib markii warbaahinta Online-ka ee Puntland ay daabaceen in la musuq-maasuqay mashruuca dib loogu dayactirayo wadada laamiga ah ee isku xirta magaalooyinka Garoowe iyo Gaalkacyo.
Ilaa iyo afar shirkadood oo maxali ah ayaa isugu soo haray tartanka qandaraaska mashruuca, iyadoo dhawaan la filayo in lagu dhawaaqo shirkada ku guulaysatay mashruuca ay malaayiinta dollar ku baxayso.
Maxkamada ciidamada Puntland oo labo xubnood oo Al-Shabaab ah ku xukuntay dil toogasho ah
Guddoomiyaha guddiga doorashooyinka dadban ee Soomaaliya oo sheegay in 112 xildhibaan oo aqalka hoose ah iyo 43 aqalka sare ah lasoo doortay ilaa iyo hadda
Muqdisho-(Puntland Mirror) Xildhibaan katirsan baarlamaanka Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa gelinkii dambe ee Sabtida lagu dilay magaalada Muqdisho. Cusmaan Cilmi Boqore, oo lagu qiyaasayo 80-sanno jir kaasoo ahaa xildhibaanka ugu da’a weyn golaha baarlamaanka ayaa waxa [...]
Ciidamada dowladda Soomaaliya oo ugu yaraan labo maleeshiyo Al-Shabaab ah ku diley gobolka Bakool
Muqdisho-(Puntland Mirror) Ugu yaraan labo maleeshiyo Al-Shabaab ah ayaa lagu diley dagaal u dhaxeeya ciidamada dowladda Soomaaliya iyo maleeshiyada Al-Shabaab oo ka dhacay gobolka Bakool maanta ooo Jimce ah, sida uu sheegay sargaal. Korneyl Teeso [...]